သကျတနျ့ခြို: June 2019
ဘယ်တော့မှ သွေးအေး မသွားကြပါနဲ့
သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု- Child Rape ကို သေဒါဏ်မှ တပါး သင့်တော်သော ပြစ်ဒါဏ်မရှိဘူးဆိုတာလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ရက်က ရေးခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်
အမှုသွားအမှုလာကို ကြည့်ရတာ နောက်ဆုံးသတင်းအရ " နေပြည်တော်၊ ဇဗ္ဗူသီရိ မြို့နယ်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းတွင် အသက် ၃ နှစ် မပြည့်သေးသည့် မိန်းကလေးငယ်တဦး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက် ခံရသည်ဟုဆိုကာ တိုင်တန်းထားသည့် အမှုတွင်ဖမ်းဆီးထားသည့် တရားခံဟုယူဆရသူကို တရားစွဲတင်ရန် အထောက်အထား မရှိသည့် အတွက် ပြန်လွှတ်ထားကြောင်း ရဲမှူးကြီး မင်းဟန်က ပြောသည်။"
ဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲလည်း စိုးရိမ်စိတ်က မြင့်တက်လာပါတယ် ။ ဧရာဝတီက မေးထားတာကို ပြန်ဖြေထားတာပါ ရုပ်သံဖိုင်တွေလည်း ကြည့်လိုက်ရပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်ပြီး စီကြည့်ရအောင်
၁ ။ ခွေးစိတ်ဝင်ပြီး အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရတဲ့နေ့ - မေ ၁၇ ( မိခင်ကိုယ်တိုင်အမှုဖွင့်ခဲ့ )
၂ ။ ဖြစ်စဉ်ကာလ - ၁ လကျော်ကြာမြင့်
၃ ။ တရားခံ - ဖမ်းဆီးမမိသေး
၄ ။ တရားခံဟု ယူဆသူ - ၁ လခန့်ဖမ်းဆီးပြီးမှ အထောက်အထားမပြည့်စုံ၍ ပြန်လွှတ်
၅ ။ စစ်ဆေးသောအဖွဲ့ - CID လို့ခေါ်တဲ့ Criminal Investigation Department က မေ ၃၀ မှာ စစစ်တယ် ဇွန်လ ၂၄ မှာ လွှတ်လိုက်တယ်
၆ ။ Wisdom Hill ဖက်က အခြေအနေ - အမှုနဲ့ဆက်စပ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ လူ ၂၀ ကို ဇွန် ၁၇ မှာ စစ်ဆေးပြီးပြီ လို့ဆိုတယ် ရဲအဖွဲ့ကလည်း ဆရာမ ယာဉ်မောင်း နဲ့ ကျောင်းကြီးကပ်ရေးမှူးတွေကို ခေါ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုတယ်
၇ ။ ကလေးက " ဆရာမ နှင်းနုသိတယ် " ဆိုတဲ့စကားကို စစ်ဆေးသူတွေ မသိပဲမနေလောက်ဘူး ခုလောက်ဆို စစ်ဆေးပြီးလို့ အကြောင်းမထူးသေးလို့ ဘာမှ ပေါ်မလာသေးတာလို့ယူဆတယ် ။
၁ ။ ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို လူတိုင်း သတင်းတွေ ဆက်တိုက်ဖတ်လာခဲ့ကြတဲ့လူတွေဆိုသိမှာပါ ။ ကလေးဆီမှာ sperm တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အဖြေထွက်တယ် ဒါပေမယ့် ( ကလေးရဲ့ မိန်းမကိုယ်မှာ စုတ်ပြဲ ထိုးသွင်း ဒါဏ်ရာ မျိုး ) မတွေ့ရဘူး ဒါကြောင့် နောက်ရက်ကျောင်းတက်တဲ့အခါ ကလေးက ကလေးသဘာဝဆော့ကစားတော့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကြည့်ပြီး Rape Victim တစ်ယောက်ဟာ ဒီလို ဘာမှမဖြစ်သလို နေနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းထွက်လာတယ် ( လူစိတ်မရှိတဲ့လူတွေ တွေးကြတယ်ထင်ပါရဲ့ )
ခ ။ အသက်ကြီးပေမယ့် လိင်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ( မရိုသေစကား - လိင်တံမမာနိုင်တော့တဲ့ရောဂါ Erectile dysfunction ဖြစ်နေသူတစ်ယောက် )
ဂ ။ ယောက်ျားတစ်ယောက် ( လိင်စိတ်ရူးသွပ်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကလေး ရဲ့ လိင်အဂါင်္ကို မိမိ လိင်အဂါင်္နဲ့ထိတွေ့ ပြီး masturbation ပြုလုပ်ပြီး sperm ထည့်တယ်ဆိုတဲ့အချက် ဖြစ်နိုင်ချေမရှိဘူးမပြောနဲ့ အဖေအရင်းနဲ့သမီးအရင်းတောင်စိတ်မချရတဲ့ ခွေးစိတ်တွေပေါက်နေကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူးလို့မှတ်ထား ပါ )
ဒီတော့ကိုယ်ဟာ အမှုဖော်ထုတ်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အသိကိုယ့်အမြင်နဲ့ပဲ ရေးပါရစေ
- ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့က ကလေးငယ်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်စပ်သူအားလုံး ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ် ( အတွင်းလူ ၊ အပြင်လူ )
- CCTV မှာ မမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကွယ်နေတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိနေနိုင်တာမို့ အဆိုပါ Blind Spot များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်
- အဆိုပါဖြစ်စဉ်နေ့က ထူးခြားဖြစ်စဉ်ရှိမရှိစုံစမ်းရပါမယ် ( ဥပမာ ကလေးငယ် အပြင်ထွက်သွားတာမျိုး ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်နေရာရာကို ချောင်တချောင်ချောင်သွားတာမျိုး စသဖြင့် )
- အမျိုးသမီးတွေကို ဖယ်လိုက်ပါ ယုတ်စွအဆုံး ကြံရာပါပဲဖြစ်နိုင်တာမို့ ( အဲဒီနေ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် သံသယရှိသူ ယောက်ျားစာရင်း ကြီးကြီးငယ်ငယ် စာရင်းလုပ်ရပါမယ် )
- အဆိုပါ စာရင်းထဲကမှ အသက်အရွယ်အလိုက် Category အလိုက် ( စိတ်အနေအထား ၊ ထူးခြားဖြစ်စဉ် ၊ အချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး စသဖြင့် ) ခွဲပြီး စစ်ဆေးတာလုပ်သင့်ပါတယ်
- အပြင်လူအပိုင်းကိုစဉ်းစားရရင်တော့ အပြင်လူ ထိတွေ့နိုင်စရာဖြစ်နိုင်ချေ Probability & Possiblity ကို မူတည်ပြီး အဆိုပါ ဧရိယာနေ လူစာရင်းကို ပြုစုပြီး ဧရိယာတ၀ှိုက် အတွင်းလူ အပြင်လူထည့်စုံစမ်းရပါမယ် ။
- CID ရော ရဲတပ်ဖွဲ့ရော အားကိုးပါရစေ... ။ ကလေးဖက်ပဲကြည့်ကြည့် မိဘအနေနဲ့ကြည့်ကြည့် တိုင်းပြည်ဖက်နေပဲကြည့်ကြည့် သိက္ခာတရား ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား နဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူဖြစ်တယ် ။
အကြံပေးချင်တာကတော့ တရားခံအစစ်ကိုထိုက်သင့်တဲ့ ပြစ်ဒါဏ် မပေးရမချင်း လူပုံအလယ်မှာ ဒီလူဟာ ဒီလို ခွေးစိတ်ပေါက်ပြီး လူမဆန်တဲ့ အပြစ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ လက်ညှိုးဝိုင်းမထိုးနိုင်သေးပဲနဲ့
ဘယ်တော့မှ သွေးမအေးသွားကြပါနဲ့ လို့ ။
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်သစ္စာဖောက်တာက ပိုနာတယ်
မိတ်ဆွေတစ်ယောက် ကို ရန်သူလို့ သိလိုက်ရတာ ပိုနာပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဘ၀ မေ့နေလို့တော့မရဘူး
ဒါပေမယ့် နာကျင်မှုကို မမေ့လိုက်ရဘူး
ကိုယ် ဘယ်ရောက်နေလဲ ဆိုတာ ပြန်ပြန်မေးဖို့
ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါနဲ့ ။
သူတစ်ပါး ပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ပေးဆပ်လိုက်ပေမယ့်
ကိုယ့်ဖက်မှာ နာကျင် ၀မ်းနည်းရတာတွေရှိတယ်
စေတနာကို နားမလည်ပဲ ပြန်စော်ကားတာမျိုးကြုံရတတ်တယ်
" စေတနာဆိုတာ လူတိုင်းအပေါ်ထားလို့ရပေမယ့်
လူတိုင်းနဲ့တော့ မတန်ဘူး " ဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ် ။
ကလေးငယ်များသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် မရှင်သန်သင့်
" Child Rape ကို သေဒါဏ်ပေးခြင်း ၊ တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခြင်းအပြင် သင့်တော်သော ဒါဏ်ခတ်ခြင်းမရှိ "
နိုင်ငံသားတွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေဆိုတာ စံ ( standard ) ဖြစ်ရပါမယ်
ချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ လိုက်ကိုလိုက်နာရမယ့် Law ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်
ကြောက်ရွံ့ဖို့မကောင်းတဲ့ ၊ စံ ပြ မဖြစ်တဲ့ ဥပဒေတိုင်းနဲ့ပြစ်ဒါဏ်ခတ်မှုတိုင်းဟာ နောက်ထပ်ကျူးလွန်မယ့်သူတွေရဲ့ ခြေလှမ်းကို ရပ်တန့်နိုင်ခြင်းမရှိတာ သေချာပါတယ် ။
Rainn.org မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ statistics တွေအရ
- အသက်၁၈ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေကို လူကြီးတွေကနေတဆင့် လက်ဖြင့်အနိုင်ကျင့်မှု (သို့မဟုတ် ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုဟာ မိန်းကလေး ၉ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းဖြစ်ပွားနေပြီး ယောက်ျားလေး ၅၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းဖြစ်ပွားနေပါတယ် ။
- ပြုကျင့်ခံရသူ များရဲ့ ၈၂% ဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်မိန်းကလေးများဖြစ်ပါတယ်
- အသက် ၁၆ နဲ့ ၁၉ ကြားဝန်းကျင် မိန်းကလေးများဟာ အခြား ယေဘူယျအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားထက်စာရင် အဓမ္မကျင့်ခံရဖို့ ၊ ကြံစည်ခံရဖို့ ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခံရဖို့ ၄ ဆ ပိုတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
အဲ့ဒီတော့ ဒီလို အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ကလေးတွေ ဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အသက်အရွယ်မှာ
၁ ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ လက္ခဏာ များ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြေ ၄ ဆပိုများ
၂ ။ PTSD လို့ခေါ်တဲ့ Post Traumatic Stress Disorder ( ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒါဏ်ရာရပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်မှု အခြေအနေများ ) ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ ၄ ဆပိုများ
၃ ။ အဓိက စိတ်ကျရောဂါခံစားနိုင်ရခြေ ပေါ်ပေါက်နိုင်ခြေ ၃ ဆပိုများတယ်လို့ဆိုတယ် ။
ကလေးငယ်များ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဟာ ကျယ်ပြန်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်
ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ၉၃ % သော အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူတွေထဲမှာ ၇% က လူစိမ်းတွေဖြစ်ပြီး ၅၉%က ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေထဲက ကျန်တဲ့ ၃၄ % ကတော့ မိသားစုဝင်တွေထဲကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
Child Protective Services ( CPS ) ရဲ့အဆိုအရတိကျ ခိုင်လုံတဲ့သက်သေတွေထဲမှာ ၆၃၀၀၀ သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးစားမှုတွေအတွက်
၈၀ % သော ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေထဲမှာ မိဘ တစ်ယောက်ပါတယ်
၆% က ဆွေမျိုးတွေပါတယ်
၅% က အခြား ၀မ်းကွဲ နဲ့ သူစိမ်းတွေပါတယ်
၄% က မိဘတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ လက်မထပ်ရသေးတဲ့ တခြားလူတစ်ယောက်ပါတယ်လို့ဆိုတယ် ။
ထပ်ဖတ်ချင်ရင် - https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens မှာ ဖတ်နိုင်တယ် ။
ဆက်ဖက်ကြည့်ရင် ရွံစရာကောင်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ အများကြီးပါပဲ ။
အိန္ဒိယမှာတော့ ကလေးမုဒိမ်းကို သေဒါဏ်ပေးခြင်း ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပါပြီ
India introduces death penalty for child rapists (ကလေးမုဒိမ်းကောင်များအတွက် အိန္ဒိယတွင် သေဒါဏ်ပေးခြင်း စတင်မိတ်ဆက် )
ကလေးမုဒိမ်းကို သေဒါဏ်ပေးတဲ့ ၊ ကျင့်သုံးတော့မယ့် နိုင်ငံ ၁၃ နိုင်ငံရှိတယ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ် ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့
ကျူးဘား ( Cuba ) ,China, Qatar, Sudan, UAE, Tajikistan, Tunisia, Bangladesh နဲ့ Kuwait တို့ဖြစ်သတဲ့ ။
Child Rape ကို သေဒါဏ်ပေးခြင်း ၊ တစ်သက်တစ်ကျွန်းချမှတ်ခြင်းအပြင် သင့်တော်သော ပြစ်ဒါဏ်မရှိပါ ။
Labels: Facebook ပေါ်မှ စာစုများ, အတွေးအမြင်စာစုများ
ယောက်ျားတစ်ယောက် "ဘုရင်" ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ
သူ့ဘေးက မိန်းမ သူ့အပေါ်ထားတဲ့ " တန်ဖိုး " အပေါ်မူတည်တယ်
မိန်းမတစ်ယောက် " ဘုရင်မ " ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ
သူ့ဘေးက ယောက်ျား သူ့အပေါ်ထားတဲ့ " တန်ဖိုး " အပေါ်မူတည်တယ်
ဘယ်လို တန်ဖိုးထားသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ် ။
ဘ၀ ကဆိုးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ?
တကယ်ဆို .. သူ့အိုးသူ့ဆန်.. တန်ခဲ့ပါတယ်
ဒီခရီးကြမ်းကသာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ် အမေ .. ။
( မွေးနေ့မှာ စိတ်လက်ကြည်သာ အေးချမ်းပါစေ အမေစု )
ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင် အရာရာကို အကောင်းမြင်နေတတ်တယ်
မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင် အရာရာကို အပြစ်မြင်နေတတ်တယ်
အရာရာကို သဘောပေါက်နားလည်စာနာတတ်ဖို့လိုပါတယ် ။
အမြဲ ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေတတ်တဲ့ အလုပ်ရှင်က
တစ်ခုခုကို သင်ယူနေရတယ်လို့ ပြောင်းလဲတွေးကြည့်ပါလား ?
တခုခုကို မျှော်လင့်ပြီး ပေးလိုက်တာထက်
ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ပဲ ပေးနိုင်ဖို့သာ ကြိုးစားပါ
ပူပန်သောကမရှိတဲ့ အေးချမ်းမှုကို ရစေပါတယ် ။
ကိုယ်က သူများကို ချောက်တွန်းရင်
ကိုယ်က သူများကို မနာလိုစိတ်ထားရင်
လောကကြီးက .. သိပ်ကိုမျှတပါတယ်
သင်စိုက်ပျိုးတဲ့ အတိုင်း အတိအကျ ပွင့်ဖူးလာကြမှာမို့
အရာရာဟာ သင့်အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်
သင့်အိမ်မှာတော့ ဘုရင်/ဘုရင်မ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်
သင့်မိသားစုမှာ ဘုရင်/ဘုရင်မ ဖြစ်ချစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ကိုယ့်နယ်ပယ် ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ
ကိုယ်ဟာ လူလူချင်းအတူတူပဲဆိုတာ သတိထားဖို့လိုပါတယ်
စကားလေးတစ်ခွန်း နဲ့တင် စည်း ဖောက်သလို ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ
မျှော်လင့်ချက် နည်းခြင်းက စိတ်ချမ်းသာစေတယ်
သူတစ်ပါးကို စိတ်တိုင်းကျဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်
သူတစ်ပါးစိတ်ကို ပိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်
" မျှော်လင့်ချက် နည်းခြင်းက စိတ်ချမ်းသာစေတယ်
အရာရာကို လွှတ်ချထားခြင်းက သင့်ကို ပေါ့ပါးစေပါလိမ့်မယ် "